जाडोयाममा हाम्राे शरीरमा पानीकाे अपुग हुनसक्छ, यसो गर्नुहोस्, स्वस्थ हुने निश्चित - ज्ञानविज्ञान
चिसो सुरु हुनासाथै हाम्रो खानपानको मात्रा बढ्छ तर, पानी पिउने मात्रा भने घट्दै जान्छ । जाडाेमा पानी पिउन सबैलाइ मुस्किल नै पर्छ । पानी वा जललाई जीवन मानिन्छ । हाम्रो शरीरको बनावटमा ५५ देखि ७५ प्रतिशत जल हुन्छ । शरीरले आफ्नो गतिविधि सञ्चालनमा धेरै पानी खर्च गर्छ ।
उदाहरणको लागि दिनरात सासफेर्दा करिव सवा गिलास पानी खर्च हुन्छ । पसिना र मुत्रको रुपमा शरीरको विषाक्त पदार्थलाई बाहिर निकाल्नमा पनि पानीको महत्वपूर्ण मात्रा खर्च हुन्छ । त्यसैले बारम्बार पानी पियरमात्रै हामी उपयोगमा आइसकेको जलको क्षतिपूर्ती गर्न सक्छौं । शरीरमा पानीको मात्रा भएर जाडोमा मानिसहरुलाई कब्जियतको समस्या, ग्याँस वा अन्य समस्याहरुले सताउन पनि सक्छ । त्यसैले यस्ता समस्याबाट बच्न खानपानमा ध्यान दिनुपर्छ ।
मानव शरीर जति कम बोसोयुक्त हुन्छ मांसपेसीमा जलधारण गर्ने क्षमता त्यति नै धेरै हुन्छ । यसैले मोटा मानिसहरुको तुलनामा पातला मानिसहरुको शरीरमा धेरै जल पाइन्छ । शरीरमा १० प्रतिशत तरल पदार्थ कम भएमा कुनै पनि मौसममा डिहाइड्रेसनको खतरा बढ्छ ।
त्यसैले शरीरलाई स्वस्थ, उर्जामय राख्न तथा किड्नी जस्ता अंगको कार्यसम्पादन ठिक गर्नको बारम्बार पानी पिउन जरुरी छ । कति पानी पिउने ? शुद्ध खानेपानीको कमीको कारण हामीलाई विभिन्न रोग लाग्न सक्छ । जाडोयाममा प्यास कम लाग्ने कारण हामी कम पानी पिउँछौं । शरीरमा पानीको कमी स्वास्थ्यको लागि खतरनाक हुन्छ ।
त्यसैले हामीले जाडो याममा पनि कम्तीमा २-३ लिटर पानी वा तरल पदार्थ जस्तै कागती पानी, नरिवल पानी, ग्रीन टी लस्सी आदि पिउनुपर्छ ।
हाम्रो जानकारीहरु अरुलाई पनि देखाउन कृपया सेयर गर्नुहोला । तपाइको एक सेयरले थाहा नभएकाहरुले ज्ञान पाउछन भने हामीलाई पनि सहयोग हुनेछ । धन्यवाद ।
Topics #जाडाेमा कति पानी पिउने ? #जाडोमा पानीकाे अपुग हुनसक्छ #पानी कहिले पिउने कहिले नपिउने ?
Don't Miss it बढ्दाे चिसोका कारण छातीमा कफ जम्ने समस्या छ ? घरेलु उपचार बाटै ठिक हुन्छ
Up Next रोग र मृत्यु दर घटाउन शाकाहारी बनाै